Ulwimi lwaseRussia. Zeziphi iileta ezivakaliswa konsonanti? Zeziphi iileta oonxibelelwano bengevayo? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Ulwimi lwesiRashiya. Ziziphi iileta ezivakaliswe kwiinconon? Ziziphi iileta ezizithengisa izithulu?
Okokuqala, ayizizo iileta, kodwa izandi zivakala okanye azizithulu, zinzima okanye zithambile. Kukho izandi ezingama-37 zekhonkco kulwimi lwaseRussia.vakaliswa ngelizwi ngelizwi kunye nengxolo, kwaye abazizithulu baziwa kuphela ngoncedo lwengxolo.
Okwesibini, ileta ngumfanekiso ocacileyo wesandi.
Ngoko, iinconon zivakalisi, zinezibini zezithulu
: B, B, D, D, F
P, F, K, T, W.
Kukho izandi ezingenazo izibini ezizithulu: M, H, P, L.
Kwaye kukho izandi ezingenazo zimbini: C, H, X, U
Kukho nesandi se-sonorous sound (i-quot; yotquot;)
Andiyi kubhala malunga neendononongo ezinqabileyo nezikhuni eziboniswa kunye nezithulu ngexesha elinye, ngenxa yokuba umbuzo awunakunyuswa (nangona kuya kufuneka ukuba uwakhulume ngawo, ngaphandle koko akucaci ukuba i-37 (izandi ezizantonileyo) zivela phi?
Ezi konsonanti ezinezibini ezichaza oonobumba - ikhonco, kulula ukukhumbula, oonobumba basebenzisana kwaye ngenxa yoko ukukhumbula kubo akunzima. Kodwa apha, ukuze ukhumbule zonke ezinye iileta, kufuneka uqale ukhumbule ngonobumba bonke oonobumba, wazi ukuba zingaphi oonobumba kunye neekhonsonanti, kwaye usalikhumbula inani lezandi. Ndikhe ndakhumbula esikolweni ukuba kukho iiconsonants, kodwa ngenxa yesizathu esithile izandi zaphuma entlokweni yam.
Abanye bakuthola kulula ukukhumbula kwiilayibhile; kuba abanye abantwana, imemori ebonakalayo isebenza ngcono. Amacwecwe angezantsi aya kunceda ukwahlula izonondi kwizithethi kunye nezithulu kwaye ufumane apho isandi esithambileyo kwaye yintoni isandi asinayo ibini.
Ndiyasikhetha le ndlela yokuqonda nokukhumbula ngeefowuni ezizithethileyo kunye nezithulu kunye nezohlulo zabo zibe ngamagama abiniweyo kunye nabangakhange baxhamle.
Itafile ebizwa ngokuba yi-ribbon yeencwadi kwaye ihlala ixhonywe kwibhodi kwisikolo esiprayimari ukuba ikhunjulwe kakuhle.
NgesiRashiya, izandi zentetho zihanjiswe kwizandi ezizithulu nezandiweyo, zidibeneyo:
b-p, ws, d-t, v-f, g-k, w-sh (eyokuvakaliswa okokuqala, isithulu sesibini)
kukho ukungafihliweyo okuchaziweyo - l, m, p, n
imfama, idibene, x
Imibuzo ye-27 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,434.